आज २०७७ कात्तिक ४ गते मंगलबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? हेर्नुस – Rapti Khabar
आज २०७७ कात्तिक ४ गते मंगलबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? हेर्नुस
यस्तो छ कोरोनाबाट दुई पटक थला परेका व्यक्तिको अनुभव
वासिङ्टन, असोज १९, जोर्डन जोजीलाई पहिलो पटक मार्चको मध्यमा कोरोना भाइरस संक्रमण भयो। अमेरिकाको जर्जिया राज्यस्थित मेकनका यी २९ वर्षीय वकिल अप्रिलको मध्यसम्म बिरामी नै थिए। मार्च लागेपछि उनी निको भए, उनको स्फूर्ति पुनः फर्कियो। १८ मेमा उनले प्लाज्मा दान पनि गरे। त्यसको दुई सातापछि रगतमा एन्टिबडी देखिएको रिपोर्ट उनले प्राप्त गरे। त्यहीबेला स्वाब परीक्षण […]
असई गोविन्द विकको ह’त्याबारे यस्तो छ प्रहरी निष्कर्ष
संक्रमितलाई सरकारी अस्पतालको यस्तो उर्दी